Posiposy Maroloko Voizin’olona No Mifehy Ny Araben’i Dhaka Renivohitr’i Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2016 17:05 GMT
Posiposy ao Dhaka. Sary an'i blackthorne57 nampiasàna lisansa Creative Commons (CC BY-NC 2.0)
Dhaka, renivohitr'i Bangladesh, dia fantatra amin'ny hoe tanànan'ny Maoske sy tanànan'ny taotrano Mughal. Amin'ny maha-iray amin'ireo tanàna be mponina indrindra eto an-tany azy — miaraka amin'ny fifamoivoizana mifanety sy mifanitsa-kitro manaporofo izany — manana toetra iray amantarana azy ihany koa i Dhaka: tanànan'ny posiposy.
Eny rehetra eny ao Dhaka ireny fiara fitaterana voizin'olona ireny. Vinavinaina ho 600.000 ireo posiposy ao an-tanàna, na dia latsaky ny 100.000 monja aza no manana fahazoandàlana. Ampitahao amin'ireo posiposy 37 teny an-dalamben'i Dhaka tamin'ny 1941 izany.
Feno posiposy amin'ny loko rehetra ny arabe ao Dhaka, mandray anjara be amin'ny olan'ny fifamoivoizany. Sary an'i Kazi Minhazur Rahman nampiasàna ny lisansa Creative Commons (CC BY-NC 2.0).
Dhaka, tanànan'ny làlana marindrano sy lalankely tery amin'ny ankapobeny, dia tsy manana fitaterana iraisana ampy sy sahaza ho an'ny daholobe. Ireo posiposy no tompon'ny lalàna eto satria azo lazaina ho mora ny sarandàlana. Noho izay antony izay, feno posiposy betsaka ao amin'ilay firenena, saingy mitàna toerana be amin'ny olan'ny fifamoivoizana ao an-tanàna ireo andiana posiposy maro voaravaka marevaka. Ao amin'ny sehatra fifampiresahan'ny Sydney Cyclist, mpampiasa iray no namariparitra ny zavamisy :
Rehefa miteny aho hoe eny rehetra eny ny posiposy, dia tena eny rehetra eny mihitsy no tiako holazaina, ankoatry ny feon'ny anjomaran'ny fiara, ny feo miverimberina dia ny lakolosy kelin'ireo bisikilety ary ireo posiposy kadraoka tsy misy na inona inona, mikarantsana eny amin'ireo làlana mikintaontaona.
Ity misy fanadihadiana fohy ao amin'ny YouTube nakarin'ny Abstract Films, izay manaraka mpivoy posiposy telo samihafa manerana ny araben'i Dhaka no sady miresaka ny fiainan-dry zareo ary ireo fanamby sedraina amin'ny asany.
Tany amin'ny fiandohan'ny andian-taona 1930 tany no tonga tao Bangladesh ny posiposy. Hatramin'ny fiandohan'ny andian-taona 1970, fitaovana fitaterana nahazatra tao Dhaka ny posiposy. Na ankehitriny aza, anaty fombam-piainan'ireo olona an'aliny ity fitaovana fitaterana mora vidy, manaja ny tontolo iainana, tsy mandoto ity. Amin'izao fotoana izao, 40% amin'ny vahoaka no mandray posiposy mifamoivoy ao an-tanàna.
Taokanton'ny posiposy. Sary an'i Anduze, mpivahiny mpitsidika, nampiasàna ny lisansa Creative Commons (CC BY-NC 2.0).
Tany amin'ny andro voalohany nisian'ny posiposy, na izy ireny zara raha noravahana, na tsy nasiana mihitsy. Indraindray, nanomboka nipoitra ireo sary fandravahana teny an-damosin'ireo posiposy tany amin'ny andian-taona 1960. Taharo fototra ho an'ny taokanto an-tanàndehibe io fandravahana io izao. Manampy amin'ny fandokoana ny fitaterana ao an-tanàna ireo kintan'ny sarimihetsika, sarin'ny tontolo, biby, raharaha politka amin'izao vaninandro izao, sary samihafa ary hatramin'i Osama Bin Laden. Asongadin'ity pejy Facebook mitondra ny anarana hoe “Lokon'ny Posiposy/Taokanton'i Bangladesh” ity ireo sary samihafa fanaingoana ny posiposy fahita manerana an'i Dhaka.
Nampiasaina ho toy ny hetsi-panoherana ihany koa ny fandokoana posiposy. Na izany aza, tsy voafetra ho amin'ny posiposy ihany ilay taokanto. Lohahevitra miha-malaza ihany koa izy ankehitriny amin'ny hay endrika sy bika, miaraka amin'ireo sarinà posiposy hita eny amin'ireo saris, shalwar kameez ary kurtis.
Mpivoy posiposy miala sasatra makamaka aina hiatrehana ny asa mafin'ny tontolo andro mbola ho atrehany. Sary an'i Mirza Ferdous Alam, nampiasàna ny lisansa Creative Commons (CC BY-NC 2.0).
Misy mihitsy hatramin'ny fasan'ny posiposy ao Dhaka. Tsy mino ve ianao? Ity ny sary iray amin'ìzany:
Fasan'ny posiposy ao Bangladesh